के तपाईंलाई थाह छ, अधिक समय त उहाँ चेलाहरूसित हुनुहुन्नथ्यो। यी चालीस दिनमा उहाँ जति समय चेलाहरूबाट अलग हुनुहुन्थ्यो, त्यसभन्दा थोरै समय मात्र उनीहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो। यस अवधिभित्र उहाँ उनीहरूकहाँ फरक समयहरूमा फरक ठाउँहरूमा देखापर्नुभयो। कहिले उहाँ धेरैजनाकहाँ देखा पर्नुभयो; कहिले उहाँ थोरैजनाकहाँ देखा पर्नुभयो। कहिले उहाँ विहान सबेरै देखा पर्नुभयो; कहिले उहाँ दिउँसोको उज्यालैमा देखा पर्नुभयो र कहिले बेलुकीपख देखा पर्नुभयो। कहिले उहाँ यहूदीयामा देखा पर्नुभयो, कहिले गालीलमा (प्यालेस्टाइनको मानचित्र हेर्नुहोस्)। उहाँ कहिल्यै पनि लामो समयसम्म देखा पर्नुभएन -- केवल उहाँको पुनरूत्थानको निश्चयता दिलाउने गरी केही समयको लागि देखा पर्नुभयो।
यूहन्ना १४:२-३ हेर्नुहोस्। प्रभु येशूले भन्नुभयो: “म ...जान्छु ....म फेरि आउनेछु”। उहाँ कहाँ जानुभयो (यूहन्ना १४:२)? _____________________________। उहाँ त्यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ (यूहन्ना १४:२? ____________________________________________। उहाँ फेरि किन आउनुहुनेछ (यूहन्ना १४:३)? ______________________________________। साँचो विश्वासी जनहरूका निम्ति (पद १) एउटा सुन्दर, निश्चित, स्वर्गीय आशा छ (पद ३)।
आज विश्वासीहरू कसरी जिउनुपर्छ -- विश्वासद्वारा कि दृष्टिद्वारा (२कोरिन्थी ५:७)? ____________________। थोमा दृष्टिद्वारा हिँडे अनि उनले आफ्ना आँखाले देखेको कारण विश्वास गरे (यूहन्ना २०:२४-२९)। यूहन्ना २०:२९ मा प्रभुले भन्नुभयो, “उनीहरू धन्य हुन्, जसले देखेका __________, तापनि ______________ गरेका छन्।” येशू ख्रीष्ट आज जीवित हुनुहुन्छ भनेर के तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ? कसरी निश्चित बन्न सकिन्छ? के उहाँलाई तपाईंले कहिल्यै देख्‍नुभएको छ र?
प्रभु येशू यस पृथ्वीबाट कहिलेसम्मको लागि जानुभएको छ? कहिलेसम्म उहाँ फर्किनुहुन्न? प्रेरित १:६ मा चेलाहरूले यस्तै प्रश्‍न सोधे अनि यसको जवाफ पद ७ मा छ -- “पिताले आफ्नै अधिकारमा राख्‍नुभएका __________ वा __________ विषयमा जान्ने काम तिमीहरूको _____________।”